Ama-antiparasites amahle kakhulu ezinja: izifutho, ama-shampoo nama-collars | Izinja Umhlaba
Ama-antiparasites amahle kakhulu ezinja: izifutho, ama-shampoo nama-collars
Izilwane ezifuywayo akuzona amathoyizi, kodwa izidalwa eziphilayo ezinobuntu nokuphila kwazo, kepha zithembele kithi ukuze sibe nempilo enhle. Ngakho-ke ama-antiparasites ezinja angenye yezinto zokuqala okufanele sizicabangele ukuze izilwane ezifuywayo ziphilile futhi, sibuyile, thina, ngoba ukuba namazeze ekhaya kuyisihogo sangempela.
Ngakho-ke kule ndatshana Silungiselele uhlu ngama-antiparasites amahle kakhulu ezinja zazo zonke izinhlobo (izifutho, amakhola, iziphikisi, ama-shampoo ...) ngakho-ke ungakhetha eyodwa oyidingayo ngaso sonke isikhathi. Khumbula, noma kunjalo, ukuthi okubaluleke kakhulu (ama-pipettes kanye nephilisi lezibungu) kuthengiswa kudokotela wezilwane kuphela. Sincoma futhi ukuthi ubheke le enye indatshana emayelana ne- Amapayipi ama-6 amahle kakhulu wezinja.
I-Zotal Parasital Blister ...
I-Zotal Parasital Lotion...
UZotal - Umgexo weParasital ...
Umgexo we-Antiparasitic ...
I-PROZADALAN Idizayini Entsha ...
1 Ama-antiparasites amahle kakhulu wezinja
1.1 I-shampoo engokwemvelo yokuxosha
1.2 Impukane, umkhaza kanye nesifutho sokuxosha omiyane
1.3 I-Neem Oil Repellent Spray
1.4 Ikhola eligcwele i-lavender ne-citronella
1.5 Amaconsi ukuvimbela izikelemu
1.6 Isifutho esiphikisayo sazo zonke izinhlobo zezinambuzane
1.7 Amaphilisi okuvikela imvelo
2 Ingabe amakhambi emvelo ayasebenza?
3 Izinhlobo zama-antiparasites
4 Ungayikhetha kanjani i-antiparasite enhle kakhulu yenja yakho
5 Ungazithenga kuphi izinja ngama-antiparasites
Ama-antiparasites amahle kakhulu wezinja
I-shampoo engokwemvelo yokuxosha
Ama-antiparasites amahle kakhulu wezinja ozozithola (ngaphandle kwalokho, sigcizelela, amapayipi kanye namathebulethi athengiswa kuma-vets) yilona shampu elenza izingwazi, umkhaza kanye nomiyane. Iqukethe i-citronella, isitshalo esaziwa ngamandla aso okuxosha izinambuzane, futhi sine-PH engathathi hlangothi futhi sivumelane nezinja (PH7), ukuze ukwazi ukusisebenzisa ngaphandle kokwesaba. Ngaphezu kwalokho, iqeda lezi zinambuzane ezimbi ngesikhathi nangemva kokugeza. Inosayizi abathathu abahlukene (300 ml, 1 L no-5L) ukuze ukwazi ukukhetha okukufanele kakhulu wena nesilwane sakho. Ukuphawula kugcizelela ukuthi imiphumela ye-shampoo iyabonakala kusukela kumzuzu wokuqala, nokuthi ishiya nephunga elimnandi kakhulu futhi isikhumba sithambile futhi siyacwebezela.
Impukane, umkhaza kanye nesifutho sokuxosha omiyane
I-Anti-flea Natural Spray ...
Lokhu kuxosha ngesifutho nakho kuyindlela enhle yokuhlanganisa kanye nepipette esivame ukuyifaka enjeni yethu. Yenziwe ngezithako zemvelo zonke (ezifana ne-neem oyela, i-citronella noma i-geranium ekhishwe, okuyizinto eziphindaphindayo zemvelo) futhi akuhloliwe ezilwaneni. Ingasetshenziswa kuzinja zombili namakati ngendlela elula kakhulu, ukumane ukhombe isifutho ngemuva nokugwema amehlo namakhala.
I-Neem Oil Repellent Spray
I-CLOSTER Neem Pet ...
Lokhu okunye ukuzuza okufafazayo nakho kuwusizo olukhulu lokuhlanganisa namapayipi uma sifuna ukunikeza ukuphepha okwengeziwe kwabanoboya bethu uma, ngokwesibonelo, sihlala sithatha uhambo lwasensimini noma uma singafuni ukuthi izakhamizi ezingafuneki zensimu zilethwe kithi. Umsebenzi uhlala ufana, fafaza isilwane ngokugwema amehlo namakhala. Lo mkhiqizo ubuye uwuvumele ukuthi usetshenziswe ezinjeni, emakati nasemahhashini futhi uncoma nokuthi usebenzise umkhiqizo ezindaweni ezifana nasendlini noma embhedeni lapho isilwane sethu silala khona ukuqinisekisa ukuthi azikho izimuncagazi.
Ikhola eligcwele i-lavender ne-citronella
I-Toldi Treatment of...
Olunye lwamakhola akhiqizwa phezulu e-Amazon yile modeli eluhlaza okwesibhakabhaka eguquguqukayo enikela ngezinyanga eziyi-8 zokuvikelwa kwamazeya namathiki. Umsebenzi wayo uvikela ikakhulukazi, ngakho-ke akufanele isetshenziswe ekuhlaselweni okukhona kwama-parasites. Ikhola lisebenzisa izithako ze-lavender, i-citronella nelemoni ukugwema izimuncagazi ezingathelela inja yakho. Ngaphezu kwalokho, ayinamanzi, ngakho-ke inja ingayisebenzisa ngaphandle kokwesaba noma ngabe igeza olwandle noma ibanjwe eshaweni.
Ekugcineni, kufanele kucatshangelwe ukuthi umenzi uncoma ukuqala yisebenzise ezilwaneni ezindala kunamasonto ayisithupha, ngoba imidlwane isizwela kakhulu ngephunga lekhola.
Amaconsi ukuvimbela izikelemu
Izilwane ezifuywayo ezihlanzekile ...
Ezinye ze-parasites ezivame kakhulu futhi ezingathandeki emakati nasezinja yizibungu. Yize kungcono ukubanikeza iphilisi njalo kaningi (lapho udokotela wezilwane esitshela) ukuvikela nokubaphatha, ezinye izixazululo zemvelo, ezifana nalawa amaconsi, zingasiza ukuvimbela. Ukusebenza kwayo kulula kakhulu, ngoba kufanele ubangeze ekudleni kuphela.
Isifutho esiphikisayo sazo zonke izinhlobo zezinambuzane
Uma ufuna isifutho semvelo esingangeni kuzo zonke izinhlobo zezinambuzane, ngeke uthole inketho ephelele ukwedlula lena. Ixosha yonke into kusuka kumazeze, imikhaza nomiyane kuya kuzimpukane ngisho neminyovu. Ngenxa yokwakheka kwayo okungokwemvelo, okususelwa ku-citronella, akubeki engcupheni inja yakho futhi kunikeza ukuvikeleka okwengeziwe kulokho kwamapayipi lapho uya ekuhambeni. Isetshenziswa kalula, ngoba kufanele nje uyifafaze ngokumelene nokusanhlamvu nokugwema ikhala namehlo. Ekugcineni, kunconywa ukuthi uyisebenzise ngaphambi kokuphuma uhambe ngezinja zasedolobheni futhi kabili ngosuku ezinjeni ezihlala ezindaweni zasemakhaya.
Amaphilisi okuvikela imvelo
Beaphar - Amathebulethi ...
Futhi sigcina ngalo mkhiqizo, futhi, okuhambisanayo nokwelashwa njengamaphilisi okubulala izikelemu, kulokhu, ithebhulethi eyenziwe ngamakhambi anjengegalikhi, i-chamomile, noma i-thyme. Zisiza ukuvimbela ama-parasites kepha futhi zisiza ukugaya kwenja yakho. Kodwa-ke, imiyalo kufanele ilandelwe ngokucophelela, njengoba kufanele inikezwe ngokushintsha kwesizini nangokuya ngesisindo sayo.
Ingabe amakhambi emvelo ayasebenza?
Muva nje amakhambi emvelo asemfashinini kakhulu, futhi kubonakala sengathi zingabiza imali eningi ngokudwenguliwe njengaleyo engathungiwe, yize lokhu kungenjalo ngaso sonke isikhathi.
Yize kusobala ukuthi sifuna kuphela isilwane sethu okungcono kakhulu, iqiniso ukuthi into enesibopho kakhulu njalo, njalo, naka udokotela wezilwane wethu, okungasiqondisa enqubweni yokuthi yini okufanele isilwane sethu. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi uzophakamisa ukuthi azisebenzise zombili, ngoba, yize izixazululo zemvelo zingafinyelela eqophelweni futhi ikakhulukazi njengokuvimbela, akufanele sizichithe ngokuphelele izixazululo zamakhemikhali njengamaphayiphi asebenza kakhulu alwa namazeze eFrontline isitayela, noma amaphilisi antiparasite (futhi empeleni athengiswa kuphela ezikhungweni zezilwane).
Njengoba nje singenathemba lokululama kusuka, sithi, ukutheleleka ngaphandle kwama-antibiotic kanye nenkomishi nje ye-chamomile, izilwane zethu ezifuywayo kwesinye isikhathi zidinga usizo lwamakhemikhali ukubhekana nezifo noma izingozi ezithile (njengezinambuzane) ezingacasha. Kungakho kubaluleke kakhulu, futhi sihlala sigcizelela kakhulu, ngokubaluleka kweseluleko udokotela wezilwane angasinikeza sona.
Kukhona ama-antiparasites amaningi ezinja enza umsebenzi wawo ngokuphelele noma ongayisebenzisa ngokuhlangana neminye imikhiqizo. Phakathi kokuvame kakhulu kukhona okulandelayo:
Akungabazeki izindlovukazi zombili ukwelashwa nokwenziwa kwemikhaza kanye nokuzivikela futhi izibungu zalo zingamaphayiphu wemikhiqizo efana ne-Frontline, Scalibor, Advantix ... Ukusetshenziswa kwayo kuvame ukufana: kufanele ususe izinwele endaweni lapho ungeke ufinyelele khona futhi usakaze uketshezi oluvela kupayipi kaningi noma kancane inyanga.
Amaphilisi kungenye yezindlela ezisebenza ngempumelelo kakhulu zokulwa namagciwane, ikakhulukazi lezo ezinconywe udokotela wezilwane. Imvamisa belapha ukungenwa yizikelemu nezinye izibungu emzimbeni wesilwane, okungaba kubi kakhulu. Kukhona nezithako zokuvimbela nezemvelo, okuyiqiniso, ezingasebenzi kangako ekwelashweni.
Izifutho kuyindlela enhle yokugcwalisa amapayipi kanye namathebulethi, ngoba asivumeli nje kuphela ukufafaza isilwane sethu (okuthile okuwusizo ngempela uma uhlala ezindaweni zasemakhaya nezinamahlathi, ezinezimbungulu eziningi) kodwa futhi ngoba zisivumela ukuthi sifafaze izindawo ezivamile ezifana nombhede wazo, indlu, usofa ... ukuze kudaleke ukuvikelwa kwemvelo okusiza ukuvimbela ukuvela kwama-parasites.
Noma kunjalo ukusebenza kwayo kuncike kakhulu ezindabeni ezifana nomkhiqizo, inja futhi, ikakhulukazi, indawo ohlala kuyoKuyafaneleka ukusebenzisa ikhola elihlanganiswe namapayipi akhukhumezayo. Lokho okwenziwe ngezithako zemvelo kuvame ukuhlanganisa amaphunga angathandeki kuma-parasites, njenge-citronella, i-lavender noma i-geranium, okufana namasongo okulwa nomiyane abantu abawafaka ehlobo.
Ekugcineni, Enye i-antiparasite esebenza kahle kakhulu yezinja lapho ihlanganiswe nama-pipette ama-shampoo. Lokhu kuvumela ukuqeda amazeze nemikhaza ngesikhathi sokugeza kanti amanye afaka, futhi, amakha afana ne-citronella noma ulamula ukudala uhlobo lwesithiyo semvelo. Kumele ugcine engqondweni ukuthi kufanele ukhethe umkhiqizo omuhle, ne-PH eguqulwe izinja, futhi ungayisebenzisi uma usanda kufaka i-pipette kuyo, ngaphandle kwalokho ingalahlekelwa ukusebenza kwayo.
Ungayikhetha kanjani i-antiparasite enhle kakhulu yenja yakho
Ukukhetha kuma-antiparasites amaningi emakethe ongakwenza gcina izinto eziningana engqondweni ukuze ukusebenza kwayo kuphelele:
Okokuqala, i-pipette yanyanga zonke kanye nephilisi elwa nokuncipha komzimba elinconywe udokotela wezilwane wakho njalo uma ngikutshela. Uma uhlala ezweni, isibonelo, uzokweluleka ukuthi umnikeze kaningi.
Kuwo wonke ama-antiparasites, lapho uhlala khona kunokuningi ongakusho. Isibonelo, uma uhamba kakhulu uhamba ngezinyawo ensimini, ungahle udinge isifutho nomgexo ukuqinisa amapayipi.
Ekugcineni, umlingiswa wenja yakho ungathonya nokukhetha i-antiparasitic noma enye. Isibonelo, uma ethanda ukwenza i-kibble epaki, ungathola i-anti -parasitic shampoo iwusizo, ngenkathi umvumela angene kusofa noma embhedeni, isifutho singasiza kakhulu.
Ungazithenga kuphi izinja ngama-antiparasites
Noma kunjalo i-antiparasites yenja yemvelo ingatholakala noma kuphi, amakhemikhali atholakala kuphela ezindaweni ezikhethekile. Ngokwesibonelo:
En Amazon Uzothola inani elikhulu lama-antiparasites emvelo ahlukene: ama-shampoo, imigexo, izifutho ... zazo zonke izinhlobo zokunambitheka, amamodeli namanani. Uma, ngokungeziwe, unenkontileka ngenketho yeNdunankulu, uzoba nabo ekhaya ngalutho. Noma kunjalo, akuvamile ukuthola ezinye izinketho ezinamandla ngokwengeziwe.
En izitolo ezikhethekile NjengoKiwoko noma iTiendaAnimal singathola izinketho eziningi ezahlukahlukene, kulokhu ezikhethekile kakhulu kunezindawo ezinjenge-Amazon. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, singathola imikhiqizo engcono yamapayipi, kanye neminye imikhiqizo yemvelo, njengama-shampoo, imigexo, izifutho ...
Ekugcineni, kufayela le- odokotela bezilwane Uzothola amapayipi namaphilisi ezikelemu ukuze ulaphe inja yakho ngokuvikela futhi uma ihlushwa yiyo. Akungabazeki ukuthi bayindawo engcono kakhulu esingaya kuyo uma sidinga izeluleko zochwepheshe, ngoba bangasazisa ngokwelashwa okungcono kakhulu kwenja yethu nokuthi singayiphatha kanjani, kanye nokuphendula noma yimiphi imibuzo esingaba nayo.
Kunenqwaba yama-antiparasites ezinja ezisebenza zombili ukuzelapha nokuvikela ukwenzeka kwazo. Sitshele, ngabe uke wazama noma ikuphi kulokhu esikubhalele kona? Yikuphi okuhlangenwe nakho oke waba nakho? Ucabangani ngezithako zemvelo zemikhiqizo enjengale?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ama-antiparasites amahle kakhulu ezinja: izifutho, ama-shampoo nama-collars